Qoraa Dhaleeceeyay Il ku Heynta Maxkamadda Kopenheegan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Thornberg, tillförornad Säpochef, åklagare Agneta Hilding Qvarnström och dåvarande Säpo-chefen Anders Danielsson i samband med utredningen av terroristbrottet i Stockholm i december 2010. Foto. Claudio Bresciani/Scanpix.
Qoraa Dhaleeceeyay Il ku Heynta Maxkamadda Kopenheegan
La daabacay söndag 3 juni 2012 kl 14.38
Magnus Sandelin, ahna suxufi iyo qoraa saddex buug ka qoray falalka argagixisada ayaa dhaleeceeyn dusha uga tuuray sida ey suxufiyiinta iswiidhishku uga gaabiyeen ka war-bixinta maxkamadda lagu soo oogey afarta nin ee la xiriirta falka argagixisnimo:
- Waa dembi aad u culus fal-dembiyeedyada lagu soo oogay afartan nin ee dalkan Iswiidhen ku dhaqnaa, aana qabo iney ku talo jireen, haddii uu u meel-mari lahaana ey dhalin lahayd cawaaqib xumo ballaaran. Nimankaasina oo ku sugnaa intii ey dalkan joogeen goobo laga faafiyo caqiidada.
Magnus Sandelin ayaa siiyay suxufiyiinta iswiidhishka dhibco aad u hooseeya, hase yeeshee uu sheegay in la fahmi karo dhanka ey suxufiyiinta iswiidhishku xiisahoodu u janjeerey:
- Dhan marka laga eego iyada oo ay bilaabatay mar qura maxkamaddii Anders Behring Breivik, hase yeeshee iila muuqato inay ahayd in sababtaa darteed loo xoojiyo ka soo faaloodka maxkamadda ka socotay magaalada Kopenheegan. Sidoo kale waxaan oran karaa iney aqoondarro ugu wacneeyd iyo falka oo aan lagu guuleeysan inuu dhaco, sidaa-daraadeedna aan loo barbar-dhigi karin fal la geeystey. Waxaanse qabaa in culuunta suxufiyiinta ey kor u kici lahayd la xiriirta cimilada raggaasi ku sugnaayeen, sidaa daraadeedna ey indho kale ku eegi lahaayeen.
Heyadaha wararku wuaxey lumiyeen suurtagalkaa, sida uu sheegay Magnus Sandelin.
Sandelin oo buugiisii "Iswiidhishka jihaadiyiinta ee shabakadda muslimiinta" ka soo xigtay war ay sii deeysay hayadda nabad-sugidda ku qoray iney dalkan ku sugan yihiin ugu yaraan 200 oo ruux ee islaamiyiin xag-jir ah. Iney ku fillaan lahayd inuu mid qura ku guuleeysto inuu fal-argagixisnimo ka fuliyo dalka si loo ogaado saameeynta ey falalkaasi yeelan karaan.
- Waxaannu horay u aragnaey is-miidaamintii laga fuliyay Istockholm oo haddii lagu guuleeysan lahaa sababi lahayd khatar ballaaran. Xittaa haddii ey dadkani yihiin kuwo aan sidaa ugu xeelad dheereeyn falalkaa keeni kara dhibaatooyin baaxad leh.
Halka afartan nin ee maxkamadda maanta lagaga ridey magaalada Kopenheegan ay hayadda sidoonka ee säpo aqoon u lahayd:
- Aafartan nin ayaa xudun u ah kooxaha falalkaa u dhega-nugul. Halka mid ka mid ah horay dhowr-jeer loogu qabtey goobo kala duwan, islamarkaana ay war-baahintu ka hadashey. Waa dadyow laga war-hayo oo ey caddahay iney yihiin koox aan sidaa u badneeyn.
- Saddex ka mid ah nimankaa ayaa hadda ka hor dalka Pakistaan u socdaaley, mid ka mid ahina ey sida wararku sheegeyaan tababar carrigaa ku soo qaatay. Waxaanan ogsoonahay in ciidanka nabad-sugiddu ka welwelsan yihiin ragga sidaa oo kale tababar dibadaha u taga dabadeedna dalka dib ugu soo noqdaan iyagoona dalka ku noqon kara ammaandarro.
War-baahintu waa iney ka war-bixisaa ragga noocani oo kale ah si kor loogu qaado wacyiga bulshada, sida uu sheegay Magnus Sandelin, wliba si loo yareeyo neceeybka ama argagaxa laga qabo islaamka.
- Si looga hor-tago. Waxay middaasina yareeyn kartaa sida aan qabo argagaxa laga qabo muslimiinta.